Njem Site Train Na Budapest: 10 Ihe mkpa ka ị mara | Save A Train
Home > Travel Europe > Njem Site Train Na Budapest: 10 Ihe mkpa ka ị mara
Budapest N'ezie bụ ehiwe nke Hungary. Ọ bụ a Central uche mgbe ọ na-abịa njem site Train na Budapest e nwere ọtụtụ ụgbọ oloko Kwụsị. Mgbe Travel site Train na Budapest na n'ozuzu bụ na-akpali akpali ma na-a ahụmahụ ọhụrụ n'ihi na ọtụtụ ndị, ọ pụkwara ịbụ a bit akwara-wracking mgbe ụfọdụ, karịsịa na a ọhụrụ na mba ọzọ obodo. Tinye uche gị na ala na-ewere a lee anya na 10 ihe i kwesịrị ịma banyere ụgbọ okporo ígwè eme njem na Budapest.
E nwere atọ isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke ị nwere ike njem site Train na Budapest na ha na-:
n'ebe ọwụwa anyanwụ: Emi odude ke East. Nke a bụ isi mba na intercity n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Budapest.
ọdịda anyanwụ: Emi odude ke West.
Deli: Emi odude ke South
Travel: Airport enyefe
The ezigbo ụgbọ okporo ígwè na Budapest Airport Ngwọta 2 bụ Ferihegy, na ụgbọ oloko na-arụ ọrụ ma si na Nguyati ojii na Budapest.
Ejegharị ejegharị na akpa
Ọ bụrụ na ị na-eme njem na obodo ọ bụla backpacks, handbags ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'aka ibu ijide n'aka na-na-echekwa a n'ala n'etiti gị ụkwụ mgbe ejegharị ejegharị na ụgbọ oloko na-na mma n'akụkụ.
Safety maka Woman
Women nwere ike na-eche mgbe ala mgbe ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè gburugburu Budapest. The obodo center bụ nnọọ mma maka a nnukwu obodo na dị ka ogologo dị ka ndị njem na-eji ha nkịtị uche na-adịghị na-enweghị isi n'ihe ize ndụ n'ihi na ha na-na oge ezumike ha nwere ike obi ike na ọ dịghị nsogbu ga-ha.
Njem nleta na-yikarịrị na-bulie-pocketed na mmadụ jupụtara njem ọha na eze ebe dị ka n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ebe ndị ọzọ na-abachaghị uru na-ezu ohi nwere ike ime. Ezie na nke a abụghị a na-akpata nchegbu bụ isi ọbịa na-gwara na-maara na ịnọ na nche.
inweta Around – Njem site Train na Budapest
E nwere ọnụ ọgụgụ dị iche iche ụgbọ okporo ígwè e Budapest na ụgbọ okporo ígwè njem forms a akụkụ buru ibu nke ha ọha iga nke pụtara na ị nwere ike nweta dị nnọọ banyere n'ebe nile ụgbọ okporo ígwè. Ike n'aka-elele oge na mgbe dị iche iche edoghi ị ga-mkpa iji nweta gị na-aga. Nwere ike ịchọta nke a ozi njem na ntanetị ma ọ bụ n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè. I nwekwara ike ịzụta tiketi na ụlọ ọrụ.
Nweta Onwe Gị Budapest Kaadị Iji Mee njem site na Train na Budapest
Ozugbo ị nọwo na Budapest a ụbọchị ma ọ bụ abụọ na nwetara gị biarin, ijide n'aka na-na-a Budapest Card. The kaadị awade a ọnụ ọgụgụ nke mgbakwunye dị ka free ntinye n'ime ụfọdụ ngosi ihe mgbe ochie, free ụgbọ ala/ụgbọ okporo / tram / mmiri njem, na mmiri ụgbọ.
Travel site Train na Budapest Day Njem
E nwere ọnụ ọgụgụ nke kediegwu ụbọchị njem na-site na-eme Travel site Train na Budapest. Ha ga-ewe gị ụfọdụ ịrịba ebe na-egosi gị na ikpọ mma n'ụzọ. Jide n'aka na-eme gị nnyocha tupu ị na-aga. Jide n'aka na ị na-ahụ ọtụtụ ihe na oge na obodo a.
mara mma Stations
Budapest nwere ụfọdụ ndị kasị ochie na ọtụtụ mara mma n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Hungary. Jide n'aka na ileta Eastern Railway Station (n'ebe ọwụwa anyanwụ Railway Station) na Western Railway Station (n'ebe ọdịda anyanwụ Railway Station) ị ga-esi na-ha site Travel site Train na Budapest, mgbe ị na-e na ịnabata akụkọ ihe mere eme ma ikpọ ije na Budapest nwere na-enye.
The History nke Railway Lines
The M1 akara ke Budapest bụ nke abụọ-kasị ochie ala ụgbọ okporo ígwè akara na ụwa. Ọ nọwo na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na 1894 nakwa na ọ bụ edepụtara dị ka a UNESCO World Heritage Site. E nwere otú ọtụtụ akụkọ ihe mere eme n'obodo a na ụgbọ oloko anọwo na ojiji maka afọ na ka na-agba ọsọ nke ọma.
Budapest nwere n'ezie ya niile na bụ a na-ewu ewu njem nleta ebe. Gịnị mere ịdị ka ndị obodo na-eme ka ojiji nke ụgbọ oloko dị ka ụdị nke ọha iga? Ị gaghị-emechu ihu!
Ntinye akwụkwọ A Train Ticket na maka European njem? Ọ gaghị 3 nkeji na anyị na saịtị na-ahụ ndị dị ọnụ ala tiketi maka gị ụzọ gasị. Nbanye anyị Zọpụta A Train website ugbu a. Tiketi nwere ike ugwo maka na otutu ụzọ, ihe nile iji mee ka gị na ahụmahụ dị mfe dị ka o kwere omume.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-things-know-travel-by-train-in-budapest%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Scotland, Ingbọ ologo Spain, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe